The World of Moe Thanzin: ကျွန်မညီမလေး
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 8:19 PM
I am ko phyo. Thank you for your post. Please try to post about her. I really glad to read about her.
wint htoo said...
မကြီး မပြောပြနဲ့အဲဒီ စိတ်ပုတ်ကို သိလား
ချစ်ဖို့လည်း ကောင်းနေမှာပဲး))
မကြီးရေဖတ်ရတာ ကြည်နှုးစရာကောင်းလိုက်တာ။ ရီလည်းရီရတယ်။ မကြီး ညီမလေးကတော့ စံပါပဲနော်။
မမညီမလေးက မမနဲ့ တော်တော်တူတယ်နော်
ညီမလေးက တော်တော် ကပ်သီးကပ်သပ် ပြောတတ်တာပဲ။ အမနဲ့ တူတယ် ထင်ပါရဲ့ ..
ဟုတ်ပါ့ ... ညီမလေးက တော်တော်စကားတတ်ပဲ ... ညီမဒီလောက်တတ်ရင် အစ်မလဲ ... အင်း ... အင်း ...း)